मेस्सीले आफूलाई प्रमाणित गर्ने फेरि आयो अवसर ! — Newskoseli
मेस्सीले आफूलाई प्रमाणित गर्ने फेरि आयो अवसर !
लियोनल मेस्सीले आफूलाई प्रमाणित गर्ने समय फेरि एक पटक आएको छ । आज (मंगलबार) रसियामा हुने नाइजेरियाविरुद्धको खेलमा जित हात पार्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न चाहन्छन् मेस्सी, त्यो अवसर अब आई नै सकेको छ ।
आइतबार ३१औं जन्मदिन परेका मेस्सीले यस पटक आफ्नो जन्मदिन मनाएनन् । विश्वकपमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको निराशजनक प्रदर्शनलाई भुलाएर टोलीलाई नकआउट चरणमा पुर्‍याउने दायित्व मेस्सी र उनको टिममा आएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट स्ट्राइकर भएर पनि प्रमुख प्रतियोगिताहरुमा सधैं नै स्तर अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप मेस्सीलाई लाग्दै आएकोमा अब त्यसलाई गलत सावित गर्ने चुनौती उनका सामु खडा छ ।
मंगलबारको खेलमा अर्जेन्टिनामाथि विजय हासिल गर्न सके नाइजेरिया अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्नेछ । जित्न नसकेर बराबरीकै नतिजा मात्र ल्याए पनि नाइजेरियाका लागि अघिल्लो चरणमा प्रवेशको ढोका खुल्नेछ । तर, त्यसका लागि समूहकै अर्को खेलमा क्रोएसियाले आइसल्यान्डलाई पराजित गर्नु पर्नेछ ।
आइसल्यान्डको पक्षमा नतिजा आएमा भने नाइजेरियाले गोल अन्तरमा निर्भर हुनुपर्ने खबर मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।